ဝက်သားလုံးကြော် | Wutyee Food House
« တူနာ ပန်ကိတ်
၀က်နံရိုး အချိုဟင်း »
May 10, 2012 by chowutyee ၀က်သားလုံးကြော်
ဇွန်ကျောင်းတွေလည်း ပြန်ဖွင့်တော့မှာမို့ ကလေးတွေ အတွက် အထူးစပယ်ရှယ် ထမင်းဘူး လုပ်နည်းလေးတွေ ရွေးချယ် တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ ၀က်သားကို ပါမုန့်ခြောက်ရယ်၊ ဂျုံနဲ့ ကပ်ပြီ အကြွပ်ကြော်ထားတဲ့ ၀က်သားလုံးကြော် လေးတွေပါ။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီမျှအောင် မုန်လာဥနီ၊ ပြောင်းဖူးသေး၊ ဘိုးစားပဲ တို့ကို ကြော်ထားတာလေး ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ထမင်းကတော့ ကလေးတွေ အကြိုက် Angry Bird ပုံလေးကို ဖော်ထားတာပါ။ ထမင်းဘူးလေး တူတူပြင်ကြရအောင်…
၀က်သား – ၂၅၀ ဂရမ် (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
ကြက်သွန်နီ – တစိတ် (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ ၁ပုံ
၁။ အရင်ဆုံး ၀က်သားလုံးကြော် အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (၀က်သား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ နှမ်းဆီ) တို့ကို ဇလုံတစ်ခုထဲ သမအောင် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် နုယ်ထားသော ၀က်သားများကို အနေတော် အလုံးလေးများ လုံးလိုက်ပါ။
၃။ ပြီမှ ပြီးလျှင် ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ဂျုံမှုန့်များထည့်ပြီး ၀က်သားလုံးများကို ဂျုံကပ်ပေးပါ။
၄။ ပြီးနောက် ခလောက်ထားသော ကြက်ဥခွက်ထဲ ၀က်သားလုံးများကို နှစ်စိမ်ပေးပြီး ပါမုန့်ခြောက် (breadcrumb) ထည့်ထားသော ပန်းကန်ပြားထဲထည့် ပါမုန့်ခြောက်များ ကပ်ပေးပါ။
ရ။ ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်၍ ၀က်သားလုံးများကို မီးနည်းနည်းဖြင့် အညှိရောင်သန်းလာ သည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၈။ ၀က်သားလုံးများ ရပြီဆိုလျှင် ဟင်းရွက်များကို ကြော်ပါ့မည်။
၉။ ဟင်းရွက်ကြော်အတွက် အရှည်လှီးထားသော မုန်လာဥနီ၊ ဘိုစားပဲ၊ ထပ်ခြမ်းခြမ်းထားသော ပြောင်းဖူးသေး တို့ကို အရင်ဆုံး ရေနွေးဖျော်ပေးပါ။
၁၀။ ပြီမှ ပြန်ဆယ်ကာ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ) တို့ဖြင့် ရောနုယ်ပြီ ကြက်သွန်မြိတ်များဖြင့် စည်းထားလိုက်ပါ။
၁၁။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲ ဆီနည်းနည်းထည့်ပြီ စည်းထားသော ဟင်းရွက်များကို ရေ (အနည်းငယ်) ထည့်ကြော်ပေးပြီ ပြန်ဆယ်ထားလိုက်ပါ။
၁၂။ ဟင်းရွက်ကြော်ရပြီဆိုလျှင် ၀က်သားလုံးကြော်၊ ဟင်းရွက်ကြော်တို့နှင့် ထမင်းဘူးကို ပြင်လို့ရပါပြီ…
မှတ်ချက် ။ ။ Angry Bird ထမင်းလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် သိချင်ပါက အောက်တွင် ဆက်ဖတ်ပါ။
Angry Bird ထမင်းပုံဖော်နည်း
၁။ အရင်ဆုံး Angry Bird လုပ်ရန် ထမင်း ၃ပုံ၂ပုံကို ခရမ်းချဉ်သီးဆော့(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်ကာ ရောနယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့နှင့် ရောနုယ်ထားသော ထမင်းကို တြိဂံပုံဖော်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီမှ ကျန် ထမင်းဖြူ ၃ပုံ၁ပုံကို Angry Bird တြိဂံအောက်ခြေမှာ ကပ်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် Angry Bird ပုံကြမ်းရပြီဆိုလျှင် မျက်လုံး၊ မျက်ခုံး အတွက် ရေညှိရွက်၊ ချိစ်ပြားကို အသုံးပြုပါ။
၅။ နှာခေါင်း၊ အမောက်ကို မုန်လာဥနီနှင့် ပုံဖော်ပေးပါ။
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 16 Comments	16 Responses
on May 10, 2012 at 3:01 am | Reply Wai Lynn
I want to eat…🙂
on May 10, 2012 at 3:07 am | Reply chowutyee
Thanks you too🙂
on May 10, 2012 at 4:00 am | Reply Mon Mon Aung
sis Wutyee! you are very creative. it’s so so lovely… i want to try this one. :))
on May 10, 2012 at 4:57 pm | Reply chowutyee
Thanks Ma! Plz try it!🙂
on May 10, 2012 at 4:07 am | Reply သက်လေး
on May 10, 2012 at 4:14 am | Reply myattun
လုပ်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ–ပြီးရင် ပုံစံပျက်သွားမှာစိုးတာနဲ့ စားရခက် ထားရခက် ဖြစ်နေမှာပဲ-ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်–
on May 10, 2012 at 4:58 pm | Reply chowutyee
on May 10, 2012 at 9:13 am | Reply Cho Wut Hmone
mike hla gyi lar…so creative and so clever my twin😀 sar taugh ma sar yate buu heee
haaa အိမ်စည်တော့ စားသွားတယ်..🙂
[…] May 10, 2012 ၀က်သားလုံးကြော် […]
on May 10, 2012 at 6:14 pm | Reply Hnin Wut Yee
Yummy , Thank you so much .
on May 10, 2012 at 8:12 pm | Reply Hpung
on May 11, 2012 at 11:29 am | Reply ခင်ယမုံ
on May 14, 2012 at 8:21 am | Reply mya kay khaing
ကလေးတွေအတွက် စိတ်ရှည်ရှည်နှင့်စားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင်စီမံပေးတတ်တဲ့ အစ်မကို အတုယူ အားကျမိပါတယ်…
on May 16, 2012 at 12:41 pm | Reply Su Su Wint
Thank you, I like it too much🙂